Ukugxekwa kwee-AirTags ngokunqongophala kwamanyathelo okuchasana | Ndisuka mac
Ukugxekwa kwee-AirTag ngokungabikho kwamanyathelo okulwa ukuxhatshazwa
Khange sibe semarikeni inyanga kunye nee-AirTags kwaye ukugxekwa kwabelwana ngokulinganayo nendumiso. Ngaphandle kwento yokuba sisixhobo esitsha ngu-Apple kwaye iinguqulelo zokuqala zihlala zizisa iibugs okanye ezinye iingxaki, ukugxekwa kuvela ikakhulu ekusebenziseni kwezi zixhobo njengezinto zokuhlukumeza abanye abantu. Amanyathelo okulwa ukuxhatshazwa aphunyezwe yiApple kubonakala ngathi abonelanga.
1 Ii-AirTags zibonakala ngathi ziyavavanyelwa imisebenzi engeyiyo eyenzelwe oko
2 Masibone ukuba uvavanyo kunye nezigqibo malunga namanyathelo okulwa ubundlobongela ahamba njani
3 Impendulo ka-Apple khange kube kudala iza
Ii-AirTags zibonakala ngathi ziyavavanyelwa imisebenzi engeyiyo eyenzelwe oko
Besisele sikuxelela kwakude kudala ukuba umbono wokubeka ezi zixhobo ukulandela umkhondo wabantu okanye abantwana yayingelocebo elilungileyo. Inokuba sengqiqweni ukuba ngaxa lithile ngenxa yokungakhathali isilwanyana sasekhaya siyalahleka okanye umntwana wethu abe nokudideka kwaye siphele singakwazi ukubafumana. Kodwa kubi kakhulu ukuyisebenzisa ngombono wokukwazi ukubeka esweni umntu, ukumlandela okanye ukubona apho aya khona. Kuyinyani ukuba ukwenza oko, kuya kufuneka ubeke i-AirTag kwimowudi elahlekileyo kwaye ikhuphe nesandi ... njl. Akululanga kwaye ayenzelwanga loo njongo. Nangona kunjalo abanye abantu bayayijonga Kwaye ngaphambi koko, kubuzwa ukuba ingaba amanyathelo aphunyezwe yi-Apple ngokuchasene nokuhlukumeza anele.
Kungekudala IWashington Post ikhuphe inqaku apho kuthiwa amanyathelo athathwe yinkampani awanelanga. Makhe sibone ukuba zisekwe phi ukungqina oko.
UGeoffrey Fowler we IWashington Post, Kwingxelo ephanda ukuba zingasetyenziselwa njani ii-AirTag Ukuphathwa gadalala ngasese, Ibango lokuba iApple khange iwenze kakuhle umsebenzi wayo. Nabani na onokusebenzisa enye yezi zixhobo ukuze akwazi ukulandela umntu.
Masibone ukuba uvavanyo kunye nezigqibo malunga namanyathelo okulwa ubundlobongela ahamba njani
I-Fowler ibeke kwi-AirTag Malunga naye kwaye wazimanya nogxa wakhe ukuba axhatshazwe. Iqukumbele ngelithi ii-AirTags "yindlela encinci nefanelekileyo yokuhlukumeza."
Amanyathelo e-Apple abandakanya izilumkiso zabucala zokwazisa abasebenzisi be-iPhone ukuba i-AirTag engaziwayo ihamba nabo kwaye inokuba ikwizinto zabo, kunye nezilumkiso eziqhelekileyo zesandi xa i-AirTag yahlulwe kumnini wayo iintsuku ezintathu. UFowler uthe ngaphezulu kweveki yokulandela umkhondo, wafumana izilumkiso kuzo zombini i-AirTag efihliweyo kunye ne-iPhone yakhe. Emva kweentsuku ezintathu, iAirTag eyayisetyenziselwa ukubamba iFowler yadlala isandi, kodwa "yayiyimizuzwana eli-15 kuphela yesandi esikhanyayo", efikelela kwi-60 DB. Emva koko wathula kangangeeyure ezininzi. Yaphinda yakhala eminye imizuzwana eli-15. Isandi ekulula ukusigubungela ukuba uxinzelelo oluncinci lusetyenziswa phezulu kwi-AirTag.
Ixesha lokubala ixesha leentsuku ezintathu Iqalisa kwakhona emva kokudibana ne-iPhone yomnini, ke ukuba umntu oxhatshazwayo uhlala nomntu omchukumisayo, isandi asinakuze sisebenze. UFowler uphinde wafumana izilumkiso rhoqo malunga ne-AirTag engaziwayo ehamba naye kwi-iPhone yakhe, kodwa waqaphela ukuba ezo zilumkiso azifumaneki kubasebenzisi be-Android. Uye wakhankanya ukuba iApple ayiboneleli ngoncedo olwaneleyo ekufumaneni i-AirTag ekufutshane njengoko inokulandelelwa kuphela sisandi, into ehlala isebenza.
Impendulo ka-Apple khange kube kudala iza
UKaiann Drance, usekela-mongameli we-Apple wentengiso ye-iPhone, uxelele iWashington Post ukuba amanyathelo akhelwe kwii-AirTags yiiseti yezokhuselo ekhokelayo kunye nokusebenza kwangoko ». Ucacise ukuba amanyathelo okulwa ukuphathwa gadalala kwee-AirTags anokuqiniswa ngokuhamba kwexesha kunye neenguqulelo ezintsha. «Yinkqubo ekrelekrele. Singaqhubeka nokuphucula iingcinga kunye nexesha ukuze sikwazi ukuphucula iphakheji yokhuseleko. '
U-Apple ukhethe ixesha leentsuku ezintathu ngaphambi kokuba i-AirTag iqale ukudlala isandi kuba inkampani «Bendifuna ukufumana ibhalansi phakathi kwezokhuseleko kunye nokucaphukisa komsebenzisi ”. UDrance wenqabile ukutsho ukuba ingaba iApple ibikhe yadibana na neengcali zokuhlukumeza abantu basekhaya xa besenza ii-AirTags, kodwa wathi iApple "ivulekile ukuva nayiphi na ingxelo evela kule mibutho."
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukugxekwa kwee-AirTag ngokungabikho kwamanyathelo okulwa ukuxhatshazwa
Imenyu eyimfihlo ibonakala "kwindawo echanekileyo" yee-AirTags